Winx lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
dia fahafahana mifandray amin'ny ny matoatoa izay tsy misy: tantara an-tsary, tantara sy boky maimaim-poana amin'ny aterineto lalao Winx. Very ny fahafahana hilalao miaraka amin'ny biby mahafatifaty tsy te, satria ao ny lalao mahaliana maro ny vokatra! Noho ny matoatoa, ianao manidina eny amin'ny lanitra sy manangona firavaka, ny fo sy ny kintana, mba hampitaovana ny tranony ka hitondra akanjo. Be dia be ny Puzzles sy fandokoana boky momba ilay foto-kevitra fa tsy handalo anareo, ary koa mahaliana ny mahita miafina tsiferki na miendrika toy ny taratasy amin'ny sary afara. Na dia ny fihaonana amin'ny biby goavam-be tsy mahatahotra, satria samy Fairy mihazona ny ody fiarovana.
Lalao Winx tamin'ny Category:
Winx sy Bratz
Ny tsara indrindra Winx lalao
Beauty Salon ho an'ny biby fiompy
Nail Design Winx
Winx Club: Bloom sy Lanitra - nanoroka fatratra
Winx Club Sort ny tafo tanimanga
Winx. Isa miafina
Winx Fairy Dress Up Doll
Clever sy mahafatifaty
House Winx ankizivavy
Mermaid Winx Layla
Party in Club Winx
Akanjo ny Bloom avy Winx Club
Winx matoatoa - Magic isa
Beach antoko Winx
Tia ahy ve ianao na tsia?
Find Winx Heart 3
Winx - Bloom fandokoana
New Puzzles Winx
Disney sy Winx
Winx Club mpilalao ody
Winx: taratra amin'ny matoatoa
Enchantix na Beliveks 2
Bunny Adventure Kiko
Bloom no handeha hanambady
Winx 3D Puzzles
Winx Club: Winx amin'ny zavatra mitovy?
Poppiksi: Ovy piozila
Fanendrena teo amoron-dranomasina
Winx Club: Round zava-miafina
Winx Club: Harmony mahery fo
Dress Winx ankizivavy
New fomba Winx
Stella Flora Winx Bloom sary ho an'ny gazety
Bloom ao amin'ny fikarohana tarehimarika
Winx Club: milalao onja Sireniks
Winx Club: Manaova akanjo Ahy!
Winx. Miafina isa 2
Farany Winx lalao
Winx fandokoana Fa Kids
Winx Girl: Magic Nitombo
Winx Club: Ny mahagaga biby
Winx Club: Ianao Biliviks?
Winx Club: Aoka ny elany mamirapiratra
Winx Club: ody Adventure
Winx: Sekoly lamaody
Winx Club Games Winx miandry ho anareo fihaonana amin'ny toerana tena maherifo
Lalao Online Rehetra Winx lalao
Isika dia miaina ao anatin'ny tontolo izay be dia be ny amin'ny tena tsotra zavatra: voalohany, dia mandeha any akanin-jaza, ary avy eo mianatra any an-tsekoly, dia miezaka ny hahazo ny fianarana ambony, ary avy eo dia manana mandra-fisotroan-dronono mandeha mba miasa na hitady vola amin'ny fomba hafa. Ny zava-drehetra eo amin'ny fiainantsika dia tena mahazatra: maro manana fiara, olona izay mipetraka any amin'ny Studio trano, sy ny olona ao amin'ny trano lehibe. Na izany aza, isika rehetra tia ny nanonofy, mba sary an-tsaina fa tsy ny iray amin'ireo zava-manan'aina eo amin'izao rehetra izao, fa ankoatra ananantsika olon-kafa, amin'ny inona ireo "olona" tsy afaka ho velona ihany amin'ny hafa planeta, fa koa eto amintsika, fa tsy mahamarika azy.
Ny matoatoa Magic Planet
iray tamin'izy ireo niova mpahita Ingen Straffi - Italiana mpanao sariitatra, izay namorona ny nafana andian-dahatsoratra momba ny Adventures ny ankizivavy kely matoatoa. Nafana andian-dahatsoratra dia milaza ny tantaran'ny ny ankizivavy iray atao hoe Bloom, izay niaina fiainana ara-dalàna eto an-tany alohan'ny nianatra izy fa zanakavavin'ny mpanjaka izy dia avy amin'ny planeta daomy. Ary indray mandeha amin'ny herin'ny maizina ny izao tontolo izao, Bloom miteraka fikambanana izay nahitana dimy ny vehivavy sakaizany - toy ny matoatoa, toy ny tenany. Tantara tsirairay dia miresaka momba ny fifandonana manohitra ny herin'ny ratsy matoatoa sy ny manokana ny fifandraisana, na amin'ny izy samy izy, ary amin'ny ankapobeny mifandray amin'izy ireo. Araka ny voalaza, ny Mpandray anjara, matoatoa Winx, enina.
Bloom - ny mahery fo ny nafana andiany. Dia naorina manodidina azy vanim-potoana telo voalohany amin'ny nafana andiany, izay milaza ny tantaran'ny fiainany. Izy no mpanorina ny fikambanana Winx matoatoa rehefa nahalala fa izy dia Fairy ka namely ny herin'ny maizina sekoly antsoina hoe i Alpheus. Toy ny herin'ny maizina rehetra zavaboary, Bloom manana majika "Dragon afo" - iray amin'ireo zavatra mahagaga mahery indrindra. Ao amin'ny lehibe Bloom manga maso, mena volo sy ny ara-drariny hoditra. Ny toerana tena akanjo - manga sy mavo lobaka, pataloha jeans manga amin'ny drindrina amin'ny endrika kintana sy mavo kapa.
Stella - mpandray anjara iray hafa Winx andriambavy avy any amin'ny planeta Solaria. Izy no tsara tarehy indrindra amin'ny herin'ny maizina ny Fairy izao tontolo izao, manana ny majika ny masoandro, ny volana ary ny kintana, izay nanana ny ray aman-dreniny. Izy manana maso maitso lehibe endrika tsara tarehy, volo volamena, izay matetika voaravaka kely volomparasy sisiny. Tena matetika, Stella manao akanjo maitso lohahevitra fohy, ny zipo amin'ny sequins sy maitso kapa voaravaka ny voninkazo.
Flora - Fairy amin'ny Linfa planeta. Ny hery, izay mahazatra ny rehetra ny mponina amin'ny tany niaraka taminy, ary io hery io - ny ody ny tany. Imbetsaka izy namonjy an'i Flora ao amin'ny ady ny herin'ny ratsy. Izy manana maso maitso sy ny caramel-mavo volo. Dia nanao akanjo maitso fahazavana ambony, mavokely zipo fohy sy ny kapa amin'ny frezy teo amin'ny lampihazo.
Muse - Fairy avy any amin'ny planeta Melody. Manana ny ody ny mozika sy ny firindrana, izay nahazo avy reniny. Fairy ity Azia fijery, amin'ny manga maso sy ny hatsatra hoditra. Tiany ny akanjo mena lohahevitra, lilac paty izay eo amin'ny tanana, pataloha jeans ary ny fanatanjahan-tena kiraro.
Tecna - Fairy avy any amin'ny planeta Zenith. Manana ny ody ny Nano teknolojia, izay nahay tsara. Dia manana volo fohy volomparasy, miloko manga-maitso maso. Tecna akanjo volomparasy akanjo, mitovy loko hatsembohana sy miloko isan-Sneakers pataloha.
Leyla - ny farany Fairy ny Winx, izay tonga avy any amin'ny planeta Andros. Ny tena ara-batana rano voaofana Fairy manana ody. Manana maso manga izy, maizina hoditra sy ny volo lava curling. Tiany mba handeha ao amin'ny mazava hooded palitao, kalisaona fohy sy fotsy Sneakers amin'ny alehany rehetra.
Ny tontolon'ny herin'ny maizina Winx Lalao
Tamin'ny toerana ho hitanao ny lalao Winx Club matoatoa sekoly, izay ho hitanao ny Mpandray anjara ny animation andiany. Games Winx Club Sekoly matoatoa dia tsy hifanaraka ny tovovavy, na dia teo aza ny zava-misy fa ny sariitatra no mifantoka amin'ny vehivavy antsasaky ny mponina. Winx Club matoatoa sekoly lalao dia azo jerena ao amin'ny ny toerana maimaim-poana, ka mankafy kokoa lazany. Dia hahita sokajy isan-karazany ny Winx matoatoa Club sekoly lalao, izay ahitana ny maro amin'ireo malaza indrindra lalao Genres. Raha tianao tantara an-tsary miaraka amin'ny mampihomehy matoatoa, raha te-hanana fotoana malalaka be - Tonga soa eto amin'ny ny sokajy ny Lalao Sekoly ny matoatoa Winx.